Daawo: Habraaca Cusub Doorashada Galmudug. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Daawo: Habraaca Cusub Doorashada Galmudug.
Daawo: Habraaca Cusub Doorashada Galmudug.
January 8, 2020 admin680
Gudoomiyaha Guddiga Farsamada Maamul-u-dhisidda Galmudug Cabdinaasir Geele oo shirjaraaid ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ay si rasmi ah u bilaaban doonto xulista xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug.
Mr. Geelle ayaa ka gaabsaday inuu soo bandhigo jadwal taariikheysan oo lagu hagayo soo xulista xildhibaanada iyo doorashada Madaxda Galmudug, madaama dhowr jeer oo hore fashilmay jadwalo ay soo saareen guddigan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa 20kii Juun 2019 soo bilowday dib u dhiska Galmudug, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa dib u dhacayey qorshihii Dowladda, inkastoo laga soo gudbay caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin tabashadii Ahlu Sunna.
Halkaan ka daawo shirka Jaraa’id
Deg deg:Qarax xoogan oo lagu weeraray mid kamida koontaroolada laga ilaalsho madaxtooyada soomaaliya
DFS oo bilowday Badalidda Qaar ka mid Saxiixayaasha Galmudug.
Sawirro: Bandhiga Carwada Caalamiga ah ee Buugaagta oo maanta ka furmay Muqdisho
Amisom oo dad Rayad ah ku Xasuuqday Lafoole
October 25, 2017 October 25, 2017 Cali Yare
Tiicey oo Biyo ugu deeqay tuulooyinka Cadaado (Video)